Xirnaanshaha Dekedda magaalada Boosaaso oo maanta heshiis kumeel gaar ah laga gaaray | SAHAN ONLINE
Xirnaanshaha Dekedda magaalada Boosaaso oo maanta heshiis kumeel gaar ah laga gaaray
BOOSAASO – Waxaa maanta oo khamiis ah heshiis kumeel gaar ah laga gaaray Xirnaanshaha Dekedda Boosaaso,kaasoo u dhaxeeyey Dowladda iyo Ganacsatada Puntland ee Badeecadaha kala soo dega Dekeda.
Waxaana xal laga gaaray cabashooyinkii ganacsatada ee keenay in ay diidaan in wax badeecad ah laga dejiyo dekeda weyn ee magaalada Boosaaso.
Qodobada ugu muhiimsan ee heshiiska ay wada gaareen Wasaaradda Dekedaha,Wasaaradda Maaliyadda oo isku dhinac ah iyo ganacsatada Puntland ayaa ,waxaa kamid ah
In dekedu ku shaqayso nidaamkii hore.
In khidmaha laga qaadayo gaadiidka ay noqdaan sidii hore.
In shir saddex geesood ah ay wada yeeshaan wasaaradda, Ganacsatada iyo shirkadda P&O port ee lagu wareejiyay Dekeda, shirkaasi oo lagaga niqaashi doono isbedelka ku yimid nidaamka dekeda iyo khidmadaha.
Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Puntland Siciid Maxamed Raage ayaa shalay la hadlay Raadiyaha Daljir ayaa mar kale ku eedeeyay dhibaatada kal dhalatay xirnaanshaha Dekada Boosaaso wakiiladda(Arbaabada) iyo qaar kamid ah ganacsatada Puntland.
Dekeda Boosaaso ayaa muddo 30 sano ah lagu wareejiyey shirkadda P&O Port ee dalka Imaaraatka carabta,waxayna muddo 9 maalmood ah u xirnayd muran ka dhashay Isbadel lagu sameeyey nidaamkii dekedu u shaqeyn jirtay iyo Barnaamijka tayo dhowrka cuntada ee lagu soo kordhiyey taasoo ganacsatadu ka biyo diieen.